Joe Ruzvidzo, Author at 263Chat
Tsenengamu opens up on Mujuru ouster
Joe Ruzvidzo Aug 4, 2016
Former Zanu PF Mashonaland Central youth league Chairperson Godfrey Tsenengamu today opened up on the ouster of former Vice President Joice Mujuru. Mujuru, who is now the leader of Zimbabwe People First was kicked out of Zanu PF in the…
‘State disregards right to protest’
Crisis in Zimbabwe Coalition (CiZC), a pressure group says it notes with great concern government’s response to the wave of protests that have rocked the country as citizens protested over the continued economic meltdown in the country. In…
Residents slam ‘shameless’ councillors for sustaining management sleaze
Joe Ruzvidzo Jul 28, 2016
“They have displayed Judas Iscariot traits by rubber stamping this illegal supplementary budget,” said David Mutambirwa. “The move is a mockery to ratepayers and should be dismissed with the contempt that it deserves” These sentiments come…
Video: VP Mnangagwa undressed
Leader of the splinter War Veterans group, Mandi Chimene yesterday dropped a salvo on VP Mnangwagwa accusing him of fronting Team Lacoste, a Zanu PF faction which is locked in a bitter tussle with First Lady Grace Mugabe's G40. Watch…
Pictures: President Mugabe, War Vets meeting
Below are some of the pictures 263chat captured yesterday at Zanu PF HQ where President Robert Mugabe met with the war vets. The meeting followed an 'unsanctioned' meeting by some members of the Zimbabwe Liberation War Veterans…